Global Voices teny Malagasy » Izay lazain’ireo Salvadoriana blaogera — ireo akon’ny lasa · Global Voices teny Malagasy » Print
Izay lazain'ireo Salvadoriana blaogera — ireo akon'ny lasa
Voadika ny 16 Septambra 2019 15:42 GMT 1	 · Mpanoratra Tim Muth Nandika imanoela fifaliana
Sokajy: Amerika Latina, El Salvador, Mediam-bahoaka, Tantara
Nahitàna resaka maro mikasika ireo heloka bevava natao nandritry ny ady an-trano tany El Salvador ary mbola misy fiantraikany lehibe eo amin'ny fiarahamonina foana hatramin'izao tao amin'ny tontolon'ny blaogy Salvadoriana nandritra izay roa herinandro farany izay. Namakivaky indrindra ireo resaka tsimatimanota sy ny fahatsiarovana ara-tantara nipoitra avy tamin'ny famonoana an'i Oscar Romero ary ny fanjavonan'ny zaza maro nandritra izany ady izany ireo blaogera.
Tamin'ny 24 Martsa no nitsingerenan'ny faha-26 taonan'ny namonoana ny arseveka Oscar Romero. Samy omen'ireo blaogera Hunnapuh , Jjmar , demander , Tim , ary i Rebeca voninahitra avokoa ny “feon'ireo tsy ahitan-teny” nampijaliana. Toy ny nanamarihan'ny famonoana an'i Romero ny fiandohan'ny ady an-trano tany El Salvador, manamarika i Aldebarán fa nanamarika ny fitsingerenan'ny faha-30 taonan'ny fanonganam-panjakana nataon'ny miaramila tany Arzantina ihany koa  ny 24 Martsa, izay nitarika ady maloto naharitra 7 taona ka nanjavonan'ny olona an'aliny maro na nampijalian'ny tafiky ny governemanta.
Fanambarana tsy nampoizina  no nanamarika ny fitsingerenana tamin'ity taona ity — nitafatafa tamin'i El Nuevo Herald  i Alvaro Saravia, iray tamin'ireo miaramila Salvadoriana niray tsikombakomba tamin'ilay tetika maizina, nangatakja famindram-po avy amin'ny fiangonana Katolika tamin'ny asa ratsy nataony. Nanambara ihany koa i Saravia fa eo am-panoratana boky iray hampisehoany ireo olona sy hetsika tafiditra tao anatin'ilay tsikombakomba famonoana izy. Manantena ilay blaogera Soy Salvadoreño fa hanampy amin'ny fanazavanana bebe kokoa ireo zava-nitranga taloha sy hamely mafy ny tsimatimanota  ao amin'ny firenena izany boky izany.
Tafiditra ao amin'ny tranga misy ireo mpirahavavy Serrano ihany koa ny tsimatimanota, araka ny fanasongadinan'ny blaogera Salvadoriana maro. Tamin'ny 2005, namoaka didy mikasika an'i El Salvador taorian'ny fakan'ny miaramilam-panjakana an-keriny zazavavy roa, Ernestina sy Erlinda Serrano, nandritra ireo taona voalohany nisian'ilay ady an-trano ny Fitsarana Iraisan'ireo Amerikana misahana ny Zon'olombelona (IACHR). Ny didin'ny IACHR dia nanery an'i El Salvador handoa onitra any amin'ny fianakaviana, hitady mafy ireo zazavavy ireo ary koa ireo zaza hafa tsy hita, sy hangataka amin'ny mpiasam-panjakana ambony hanao didy fivalozana ampahibemaso.
Tonga ny fotoana hanaovana ny fialantsiny ampahibemaso ary niseho ampahibemaso tao amin'ny katedraly tao Chalatenango ny minisitry ny raharaham-bahinin'i El Salvado, teo anoloan'ny vahoaka maro izay anisan'izany ny fianakaviana Serrano. Fa tsy niala tsiny izy . Nilaza fotsiny ilay ministitry ny raharaham-bahiny fa “nalahelo” tamin'ny zava-nanjo ny fianakaviana Serrano ny governemantan'i El Salvador. Nanafintohina ilay vahoaka vory teo ny tsy fisian'ny fialantsiny, toy izany koa ny tsy fahatongavan'ny filoha Salvadoriana Tony Saca nandritra izany fotoana izany.
Nandeha nihoatra noho ilay hetsika ho an'ny daholobe tamin'ny herinandro lasa teo iny i Soy Salvadoreño ary manangona ireo tranga sy fijoroana vavolombelona rehetra momba ny raharaha Serrano, tamin'ny fanaovana dingana nanoloana ny IACHR. Fanampin'izany, dia manamarika izy fa tsy tranga maningana ny raharaha Serrano. Fikambanana natsangan'ilay pretra Jezoita Jon Cortina  ny “Pro-Busqueda ” izay natao mba hampiraisana indray ireo zaza rehetra tsy hita nandritra ilay ady an-trano hiaraka amin'ny fianakaviany. Nilaza i Soy Salvadoreño fa tamin'ny nanadihadiany mikasika ny tranga 700 mikasika zaza very dia nabaribarin'ny Pro-Busqueda ny politikan'ny governemanta amin'ny fandefasana ireo zaza ireo any amin'ny trano fitaizana zaza kamboty fa tsy niezaka ny hampiray azy ireo tamin'ny fianakaviany tsirairay avy akory. Inian'ireo mpitsara tondroina ho zaza nariana ary natao hatsangana ireo zaza ireo. Zaza mihoatra ny 120 no hita napetraka any amina firenena 11 hafa, lavitra toa an'i Eoropa. Manangona andian-drohy  maro mankany amin'ireo vaovao rehetra notantarain'ireo Salvadoriana blaogera nandritra izay 18 volana farany izay ihany koa i Soy Salvadoreño.
Malahelo i Jjmar ao amin'ny Hunnapuh hoe ny ny tsy nahavitàn'ny governemenata nandefa  fialantsiny tamin'ny raharaha Serrano dia mandefa hafatra tsimatimanota  ho any amin'ny vahoaka . Ity dia heverina ho toy ny singa manamarika governemanta izay mandà ny handray andraikitra amin'ny hetsika taloha na ny hanome antoka fa tsy hisy intsony ny toy izany.
Manamarika i Aldebarán ao amin'ny Enfrentamientos fa efa an-taonany maro izay, nanambatra indray ireo zaza very maro hiverina tamin'ireo ray aman-dreniny ny Pro-Busqueda ary nalevin'ireo gazetim-pirenena  tany amin'ny pejy anatiny ireo tantara . Kanefa, nametraka ny vaomierany fitadiavana zaza very ihany ny governemanta nony farany, taona maro taty aoriana (ary satria notakian'ny didin'ny CIDH fotsiny ihany izany), ankalazaina miaraka amin'ny lohateny lehibe amin'ny pejy voalohany erak'ireo gazety tsy tia fiovana izany tranga voalohany sy tokana nahomby izany. Namoaka blaogy mikasika ireo ezaky ny Pro-Busqueda  amin'ny fanangonana fanohanana mba hamoretana ny governemanta hanaraka ilay didy ihany koa i Ligia ao amin'ny Que Joder.
Mitatitra ny US-El Salvador Sister Cities fa nanao fifadiankanina tany Chalatenango  (rohy simba) mba hanoherana ny tsy fahombiazan'ny governemanta amin'ny tsy fandraisana ny andraikiny sy mba hanarahany ny didin'ny CIDH ireo mpikatroka.
Mifanohitra amin'izany anefa, nanampy fanehoankevitra tao amin'ny blaogin'i Soy Salvadoreño i El Visitador, nanosika ny hevitry ny governemanta sy ireo olon-kafa milaza fa tsy nisy velively ireo Serrano mpirahavavy ireo .
Tsy aseho any amin'ireo haino aman-jery Salvadoriana ireny resaka mafana be ao amin'ny tontolon'ny blaogy mikasika ny tsimatimanota ireny. Niteraka adihevitra tamin'ny teny Espaniola sy Anglisy tao amin'ny blaogin'i Tim sy El Visitador ny fisian'ny fitongilanan'ireo haino amanjery ireo nandritra ny fandrakofana ireo fifidianana farany. Nanomboka ilay resaka i Tim tamin'ny fitodihana tany amin'ny fanadihadiana iray momba ny fandrakofana ireo fifidianana tany El Salvador  izay nampiseho fa nahazo fitononana maromaro kokoa tany amin'ny gazety sy ny fahitalavitra ny antoko ARENA teo amin'ny fitondrana, raha oharina amin'ny antoko FMLN, antokon'ny havia. Namaly tamin'ny fanehoankevitra maro i El Visitador, nanamarina fa mpikambana ambony dia ambony tao amin'ny “havia iraisam-pirenena” ireo nanoratra ilay fanadihadiana, ary avy eo nanohy ny famelezany ilay fanadihadiana tao amin'ny blaoginy manokana .
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/09/16/138331/
 nanamarika ny fitsingerenan'ny faha-30 taonan'ny fanonganam-panjakana nataon'ny miaramila tany Arzantina ihany koa: http://enfrentamientos.blogspot.com/2006/03/aniversarios-en-este-24-de-marzo.html
 anambarana tsy nampoizina: http://luterano.blogspot.com/2006/03/conspirator-in-romero-assassination.html
 El Nuevo Herald: http://www.miami.com/mld/miamiherald/news/14173435.htm
 hamely mafy ny tsimatimanota: http://soysalvadoreno.blogspot.com/2006/03/gente-26-aos.html
 namoaka didy mikasika an'i El Salvador : http://luterano.blogspot.com/2005/03/serrano-sisters-international-judgment.html
 Fa tsy niala tsiny izy: http://luterano.blogspot.com/2006/03/salvadoran-governments-non-apology-to.html
 tranga sy fijoroana vavolombelona rehetra : http://soysalvadoreno.blogspot.com/2006/03/gobierno-el-caso-serrano-los-hechos-ii.html
 pretra Jezoita Jon Cortina: http://luterano.blogspot.com/2005/12/fr-jon-cortina-dies.html
 nalevin'ireo gazetim-pirenena: http://enfrentamientos.blogspot.com/2006/03/nias-y-nios-desaparecidos.html
 ezaky ny Pro-Busqueda: http://quejoder.blogspot.com/2006/03/solidaridad-con-las-vctimas-para-su.html
 nanao fifadiankanina tany Chalatenango: http://jeffbogdan.net/usessc/archives/national-hunger-strike-against-impunity-of-salvadoran-government/
 milaza fa tsy nisy velively ireo Serrano mpirahavavy ireo: http://soysalvadoreno.blogspot.com/2006/03/gobierno-el-caso-serrano-los-hechos-ii.html#114366788625896897
 fanadihadiana iray momba ny fandrakofana ireo fifidianana tany El Salvador: http://luterano.blogspot.com/2006/03/media-coverage-of-salvadoran-elections.html
 blaoginy manokana: http://el-visitador.blogspot.com/2006/03/una-cadena.html